Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha XFS H.E. Eng. Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta daah furay kulan wadatashi oo ku saabsan Horumarinta dhoofinta wax-soo saarka dalka. – MOCI
, kulankaas oo ay soo qabanqaabiyeen Guddiga dhiirigelinta dhoofka Soomaaliyeed, isla markaana ay ka soo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee ganacsatada( Beeraha, Kaluunka,xoolaha, iyo warshadaha).
Wasiir Cabdullaahi Cali Xasan, ayaa Ganacsatada ku dhiiri galiyay in ay laba jibaaraan dadaalkooda sare loogu qaadaayo horumarinta dhoofka, taas oo muhiim u ah kobaca dhaqaalaha dalka iyo hormarinta ganacsiga, isla markaana ay soo saaraan badeecado tayo sare leh oo la tartami karta badeecadaha kale ee caalamaka.
Ugu danbeyn,wasiirka ayaa ganacsatada u ballan qaaday inuu dadaal badan uu ku bixin doono sidii suuq fiican loogu heli lahaa badeecadaha ay soo saaraan ganacsatada Soomaaliyeed lagana dhoofiyo badeecado kala dowan dalka.